FAQs - Handan Chuan Ding Electric Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Iwe uri kambani yekutengesa kana mugadziri?
Isu tiri nyanzvi ine ruzivo rwekugadzira midziyo yemagetsi.
Unogona kupa samples here?
Hongu, tinogona kupa samples mahara, asi iwe unofanirwa kubhadhara kutumira.
Mitemo yako yekubhadhara ndeipi?
Mari yekubhadhara iri pasi pe10,000 USD, 100% pamberi.
Kubhadhara kunodarika zviuru gumi zvemadhora kunoda kubhadharwa kwemakumi matatu muzana emari yekufambisa waya uye mari yasara inobhadharwa isati yatumirwa.
Kubhadharwa kweinopfuura $30,000 inogamuchirwa kune tsamba yechikwereti.
Yakadii nguva yekutumira?
Kune sampuli, nguva yekuendesa inenge mazuva manomwe.
Kune mabheti, kana ari mustock, kazhinji anotora mazuva mashanu kusvika gumi kuti asvike pachiteshi.
Kana pasina stock, ichava 15-30 mazuva mushure mekugamuchira dhipoziti, zvichienderana nehuwandu.
Kana iri OEM kana ODM, unoda kuita muenzaniso, iyo inowanzotora 25-35 mazuva ekushanda.
Izvo zvinodikanwa kutaura zvakadzama nezve nzira yekutakura mushure mekusvika pachiteshi.
Nzira yekugadzirisa sei dambudziko rehutano mushure mekutengesa?
Tora mufananidzo wedambudziko remhando uye utumire kwatiri kuti tiongororwe uye tisimbiswe. Tichakupa mhinduro inogutsa mukati memazuva matatu.
Package yako ndeipi?
Zvichienderana nesaizi yemhando yechigadzirwa, tinogona kuisa zvinhu mumabhegi tozviisa mumudziyo, kana isu tinokwanisawo kugadzira logo yemutengi pachigadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi.
Mutengo wako ndewei?
Mitengo yedu inogona kusiyana zvichienderana nekupa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Mushure mekunge kambani yako yatibata kuti uwane rumwe ruzivo, tichakutumira iwe yakagadziridzwa mutengo runyorwa.
Ehe, isu tinoda kuti maodha ese epasirese ave nehuwandu hunoenderana hudiki hwekuodha. Kana iwe uchida kutengesa asi huwandu hudiki, tinokurudzira kuti ushanyire ruzivo rwekusangana pawebhusaiti yedu.
Unogona kupa magwaro akakodzera here?
Ehe, isu tinogona kupa akawanda magwaro, anosanganisira kuongororwa / chitupa chechitupa, mabviro einishuwarenzi uye mamwe magwaro anodiwa ekutumira kunze.
Chii chinonzi waranti yechigadzirwa?
Isu tinovimbisa zvinhu zvedu uye maitiro. Kuzvipira kwedu kuita kuti iwe ugutsikane nezvigadzirwa zvedu. Itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi uye kugutsa munhu wese, ingave panguva yewaranti kana kwete.
Iwe unovimbisa kuchengetedzwa kwakachengeteka kwechigadzirwa?
Ehe, isu tinogara tichishandisa emhando yepamusoro ekisipoti packaging. Isu tinoshandisa zvakare zvinhu zvine njodzi kurongedza kune zvinhu zvine njodzi uye zvakasimbiswa firiji zvitakuri zvezvinhu zvinobata tembiricha. Professional kurongedza uye zvisiri-yakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwe mari.
Mari yekutumira inodhura sei?
Mari yekutumira inoenderana nekuti unosarudza kuwana sei zvinhu. Express ndiyo inonyanya kukurumidza, asiwo nzira inodhura. Kutumira ndiyo mhinduro yakanakisisa yehuwandu hwepamusoro. Mari chaiyo yekutumira inogona kupihwa kwauri chete mushure mekunge taziva ruzivo rwehuwandu, huremu uye nzira. Ndapota taura nesu kuti uwane mamwe mashoko.